Resiny tamin’ny isa 2-0 omaly alahady 07 jolay 2019, teo amin’ny lalao famaranana natao tao amin’ny “stade de France”, ny ekipam-pirenena vehivavin’i Pays-Bas. Faninefany izao tao anatin’ny andiany 8 tamin’ity fifaninanana ity no nibatan’ny vehivavy Amerikanina an’ity amboara eran-tany ity. Ny baolina matin’i Megan Rapinoe teo amin’ny minitra faha-61 sy matin’i Rose Lavelle teo amin’ny faha-69 minitra no niantoka an’izany fahombiazan’ny Amerikanina izany. Voahosotra ho mpilalao mendriky ny lalao famaranana sady mbola voahosotra ho mpilalao mendriky ny fifaninanana manontolo ilay kapitenin’ny Stars and Stripes, Megan Rapince . Nahazo ny Gant d’or –n’ny fifaninanana kosa ilay mpiandry haraton-dry zareo Néerlandaise, Sari van Veenendaal. Natolotra an’ilay Allemande Giulia Gwinn kosa ny loka “Jeune Joueuse de la FIFA”. Ny ekipa telosoratra vehivavy Frantsay kosa no nahazo ny amboaran’ny Fair-play tamin’ity fifaninanana ity. Ny ekipan’i Suède vehivavy kosa no nitana ny laharana faha-3 rehefa nandresy an’i Angleterre 2-1 teo amin’ny lalao fiadian-toerana tamin’ny sabotsy 06 jolay 2019 teo.
Adiny roa taorian’ny fiafaran’ny lalao dia nandefasan’ny filoha Amerikana Donald Trump fiarahabana tao amin’ny “compte Twitter”-ny mpilalao baolina kitra vehivavy Amerikanina.”Mankasitraka anareo i Amerika manontolo, hoy izy.
Ny Stars and Stripes Amerikanina omaly tany Frantsa